Malakia 3:16-18 « Ary tamin'izany izay natahotra an'i Jehovah dia samy niresaka tamin'ny namany avy; ary Jehovah nihaino ka nandre izany;
ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an'i Jehovah sy mihevitra ny anarany. Ary ho rakitra soa ho Ahy ireny amin'ny andro izay hotendreko, hoy Jehovah, Tompon'ny maro, ary ho antra azy Aho toy ny olona antra ny zananilahy izay manompo azy. Ka dia ho hitanareo indray ny tsi-fitovian'ny marina sy ny meloka, dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo Azy. »
Andriamanitra dia manara-maso antsika, mihaino tsara ny resaka izay ataotsika tsirairay avy amin'ny namantsika (ny resaka ny amin’Andriamanitra, ny famonjen’Andriamanitra, ny fahasoavan’Andriamanitra).
Manaraka ny fon’ny olona tsirairay avy Andriamanitra ary ny tena tiany apetraka amintsika dia ny hoe ny teny izay alokan’ny vavan’ny tsirairay avy dia teny :
- mikasika an’Andriamanitra, mikasika fampaherezana sy fanompoana an’Andriamanitra.
Nahoana angaha Andriamanitra no mametraka izany teny izany?
Satria amin’ny teny izay aloakan’ny vava dia misy fiantraikany lehibe mihitsy amin’ny toe-tsaina, ny toe-po ary ny fiainan’ny olona tsirairay avy.
Romana 10:10 « Fa amin'ny fo no inoana hahazoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena hahazoana famonjena. »
Izany hoe ny teny aloakan’ny vava dia mila tandremana tsara mba ho teny feno fampaherezana sy fanomezan-toky avy amin’ny Tenin’Andriamanitra amin'ny samy namantsika avy.
Amin’izao vanin’andro izao izany isika tadiavin’Andriamanitra mihintsy tsy hiteny ary tsy hiresaka zavatra hafa mihintsy afa-tsy izay ambaran’ny Tenin’Andriamanitra.
Ny fahatahorana an’Andriamanitra no zavatra jeren’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika tsirairay avy ary tsy misy azo atao fiantsaram-belatsihy io eo anatrehan’Andriamanitra, ny olona no azonao hanafenana fa Andriamanitra dia mahalala tsara izany hoe olona matahotra Azy! Ao amin’io malakia io Andriamanitra dia mijery ny olona izay matahotra azy eto anivon’ity izao tontolo izao ity.
Inona moa no azo hamaritana ny fahatahorana an’Andriamanitra?
Ohabolana 8:13 « Ny fankahalana ny ratsy no fahatahorana an'i Jehovah. Ny fiavonavonana sy ny fireharehana sy ny lalana ratsy Ary ny vava fandainga dia samy halako avokoa. »
Ny olona mahatahotra an'Andriamanitra izany dia olona mankahala ny ratsy, mankahala ny tsy tsi-fahamarinana sy izay mifanohitra amin’ny Tenin’Andriamanitra ary mankahala izay tsy sitrapon’Andriamanitra.
Isaia 11:2 « Ary ny fanahin'i Jehovah hitœtra ao aminy, dia ny Fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina; Ny Fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana; Ny Fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehovah »
Noho izany teny izany dia toetran’ny Fanahy Masina ny fahatahorana an’i Jehovah ! ary ny olona izany dia tsy afaka ny hatahotra an’Andriamanitra raha tsy nandray ny Fanahy Masin’Andriamanitra symitoetra amin’ny Fanahy Masin’Andriamanitra ary mandeha amin’ny fahafenon’ny Fanahy Masin’Andriamanitra.
Raha misy olona izany tsy mahatahotra an’Andriamanitra dia mampametra-panontaniana manao hoe :"ao aminy ve ny Fanahy Masin’Andriamanitra ?"
Io Fanahin’Andriamanitra io anefa no tena maha zanak’Andriamanitra antsika ary io no maha an’Andriamanitra antsika. Raha misy olona manao kitotoa, manao fitondran-tena tsy mendrika eo anatrehan’Andriamanitra sy manaonao foana ka tsy mandeha araka ny Tenin’Andriamanitra dia tokony hiheritreritra tsara izy! Mila mametraka izao foana hoe “ao anatintsika ao ve ny Fanahin’Andriamanitra?” "ao anatintsika ao ve Jesosy?"
Io fanahin’Andriamanitra io no hananantsika ny tahotra an’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra izay atao, ary io Fahiny io no hahafantsika mifandray amin’Andriamanitra.
Fa nahoana Andriamanitra no tokony hatahorana?
Misy tenin’ny Tompo manao hoe Matio 22:37 « Dia hoy Jesosy taminy: Tiava an'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra (Deo. 6. 5). »
* Ny fahatahorana dia marikin’ny fitiavana.
Marikin’ny fitiavana amin’ny fo manontolo ny fahatahorana, raha tena tia an’Andriamanitra isika dia ny fahatahorana Azy no tena mipetraka ao anatintsika, tsy afaka manao kitoatoa isika na eo amin’ny fanoloran-tenantsika manokana na eo amin’ny fanompoana na eo amin’ny zavatra rehetra izay ataontsika.
Eo amin’ny fiainana andavan’andro dia ny olona tena tiana no hatahorana (vady, ray aman-dreny, …) rehefa manomboka tsy matahotra ianao izay dia efa mihena izay ilay fitiavana !
Fa maninona no izay ilay tena fitiavana?
Raha vao tapaka io fahatahorana an’Andriamanitra io dia tsarovy tsara fa manapaka ilay fihavanana sy fifankatiavana ! (mihatra koa izany amin’ny samy olombelona)
Tsy tahotra hoe “masiaka” na "mikapoka"! Fa marikin’ny fitiavana
Jesosy no tena “modely” tamin’izany hoe fahatahorana an’Andriamanitra izany satria dia tsy nanao ny sitrapony mihitsy Izy fa izay nasain’Andriamanitra nataony no notanterahiny.
Ny mahatonga ny olona manao kitoatoa amin’ny fiainany, mahasahy manao tsi-fahamarinana amin’ny asa amandraharaha sy fitondra-tena tsy araka an’Andriamanitra io dia satria tsy misy Fanahin’ny fahatahorana an’Andriamanitra ao anatiny ary ilay Jesosy Kristy mihintsy no tsy niditra tao aminy!
Fa raha mitoetra ao anatin’ny olona ny Fanahin’Andriamanitra dia Izy no miteny aminy mihintsy manao hoe “inty no lalana ka hizory!” Jeremia 6:16 « Izao no lazain'i Jehovah: Mijanona eo an-dalana ianareo, ka izahao, ary anontanio izay lalana masaka hatry ny ela. Dia izay lalana mankany amin'ny tsara, ka iny no izory, dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo; Nefa hoy izy: Tsy hizotra izahay. »
Ohatra amin’izany fahatahorana an’Andriamanitra izany ny tantaran’i Josefa
- Ny nakan’ilay vadin’ny tompony Josefa fanahy azy :
Genesisy 39:7 « Ary taorian'izany ny vadin'ny tompony nanopy ny masony hijery an'i Josefa ka nanao hœ: Avia handry amiko. »
Genesisy 39:9-10 « Tsy misy lehibe noho izaho raha amin'ity trano ity, ary tsy misy zavatra narovany amiko afa-tsy ianao ihany, satria vadiny ianao; koa hataoko ahoana no hanao izany, ratsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra? Ary na dia niteny tamin'i Josefa isan'andro aza ravehivavy, dia tsy nety nanaiky azy handry aminy izy na hiara-mitœtra aminy. »
Nisy izany fankam-panahy dia ny fijangajangana izany nahazo an’i Josefa na dia nanana fahefana be aza izy fa natahotra an’Andriamanitra izy satria tena tiany Andriamanitra !
Matoa ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra dia tsy ao amin'ny ny Fanahy Masina, tsy mitoetra ao aminy mihintsy Jesosy Kristy.
Isika amin’izao vanin’andro hihainantsika izao dia tsy mpanara-dia an’i Jesosy fa ao anatintsika Izy « tsy aiza akory fa ao anatinareo Jesosy » 2 Korintiana 13:5 « Diniho ny tenanareo, na mitœtra amin'ny finoana ianareo, na tsia; izahao tœtra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo, fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona nolavina ianareo ? »
Ny teny aloakin’ny vavanao, ny fisainanao, ny heritreritrao, ny fikasanao… izany dia tokony avy amin’i Jesosy. Izany no mahatonga ilay teny hoe « itafio Jesosy Kristy !! » Romana 13:14 « Fa itafio Jesosy Kristy Tompo, ary aza miahy ny amin'ny nofo hahatanteraka ny filany. »
Samia miheritreritra tsara isika fa hoy ny Soratra Masina koa hoe 2 Timoty 1:7 « Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. » ary omen’Andriamanitra izany faherezana izany isika.
Fa raha ao anatintsika marina ny Fanahy Masina dia ny tahotra an’Andriamanitra no tsy maintsy lehibe ka tsy mahazo miteniteny foana, manaonao foana. Tsy manao nainona na inona mihintsy raha tsy miresaka amin’Andriamanitra aloha vao manao zavatra. Ary izay no dikan’ilay teny nozaraina etsy ambony io hoe arahin’Andriamanitra daholo ny ataon’izay matahotra Azy izay vao mipetraka tsara ilay teny hoe Malakia 3:16 « …Ka dia ho hitanareo indray ny tsi-fitovian'ny marina sy ny meloka, dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo Azy. »
Indraindray mantsy io tenin’Andriamanitra io no mandeha aloha amintsika!! Marina izany Tenin'Andriamanitra izany fa mbola jeren’Andriamanitra aloha izay am-ponao raha mandeha amin’ny fahatahorana Azy aloha ianao! Zay vao tanteraka ny fahasoavana rehetra voalazan’io Tenin’Andriamanitra io. Ka na aiza na aiza toerana alehanao, na mandeha irery aza ianao, dia mijery anao Andriamanitra! ka ny tena zava-dehibe dia : ny fankantoavana ny tenin'Andriamanitra no mariky ny fahatahorana an’Andriamanitra.
Ka rehefa mijery io Tenin’Andriamanitra io ianao dia misy toro-làlana be dia be ao ka mangataka amin’ny Tompo ianao mba hankatoa izany.
Ny fahatahorana an’Andriamanitra dia toetran’ny Fanahy Masin’Andriamanitra ary io Fanahy Masina io no hahafahanao manatona ny seza fiandrianan’Andriamanitra. Io no hahafantsika miresaka amin’Andriamanitra.
Mba tsy hahatonga anao hoe mivavaka nefa tsy mahazo valim-bavaka dia tsara ho fantatrao fa tsy fohy ny tanan'Andriamanitra ary tsy lalodalovana ny sofiny, fa ny otatsika no efitra mampisaraka antsika Aminy.
Hoy ny Tompo Isaia 59:1 « [Ny amin'ny ota, izay efitra fisarahana, sy ny fandravana azy] Indro, ny tànan'i Jehovah tsy fohy, fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalodalovana, fa mahare » Vonona ny hihaino sy hanome valim-bavaka foana io Andriamanitra io hatramin’izay, fa tsy maintsy miroso aloha ianao amin’izany hoe dingan’ny fahatahorana an’Andriamanitra.
Diniho àry ny tenanao hoe "Izaho ve olona mankatoa sy manaiky ny Tenin’Andriamanitra?" sa "izay tiako sy mahafinaritra ahy ihany no tanterahiko?" Tsy toetran'ny Fanahy Masina izany. Mbola fotoana ny fananarana izao, fa hoa avy ny fotoana hitsarana ny asan'ny tsirairay.
Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota , ny mpiavonavona, ny mpiatsara velatsiny, ny olona mankasitraka ota…Fa izay manao ny sitrapony ihany no henoiny.
Jaona 9:31 « Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota; fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny.. »
Dingana atao alohan'ny hivavahana
1. Fantaro ny tenanao, manana ny Fanahin’ny fahatahorana an’i Jehovah ve ianao ?
Ny olona dia be dia be no mivavaka amin’izao fotoana izao kanefa tsy mahazo valim-bavaka satria mbola mihosindrà ny tanany hoy ny fitenenana, maloto ny fony. Tsarovy fa hoy ny Tompo hoe Isaia 1:13 « Aza mitondra fanati-poana intsony; Fofona fahavetavetana amiko izany! Ny voaloham-bolana sy ny Sabata ary ny fiantsoam-piangonana Tsy zakako ny fivoriana masina haroharoam-paharatsiana! »
Ny olona manatona an’Andriamanitra kanefa tsy mankato ny sitrapon’Andriamanitra dia ampitovian’Andriamanitra amin’ny mpanompo sampy
1 Samoela 15:22 « Fa hoy Samoela: Sitrak'i Jehovah moa ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa alatsa-drà mihoatra noho ny mihaino ny feon'i Jehovah? He! ny manafaka no tsara noho ny fanatitra, ary ny mihaino no tsara noho ny saboran'ondrilahy. » Izany no mahatonga ilay hoe aoka isika hanatona amin’ny fahatahorana an’i Jehovah.
Noho izany izay rehetra tsy mankato ny Tenin’Andriamanitra dia aza mangataka zavatra amin’Andriamanitra mihintsy fa Andriamanitra dia mijery any an-danitra any ary voasoratra daholo izay ataontsika ary fahavetavetana eo anatrehan’Andriamanitra izany!
Ity Andriamanitsika ity anie dia Andriamanitra Masina sy Marina ary Andriamanitra saro-piaro, mandinika ny ao anatin’ny fo.
2. Dingan'ny fandinihan-tena
Manaova vavaka fandinihan-tena hamantaranao ny tenanao, diniho ny fiainam-panahinao, matahotra an’i Jehovah ve ianao? fa hanome valim-bavaka antsika Andriamanitra amin’ny farany fa tsy maintsy miroso amin’izany aloha isika mba tsy ataontsika ara-pomba fotsiny ny fivavahana.
Tsarovy fa ny olona manodidina anao tsy misy mahalala anao fa Andriamanitra mahalala anao ary hoy ny Tompo Lioka 8:17 « Fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy ho fantatra sy tsy haseho. »
Noho izany ny fahendrena dia ny mamboraka ny fahotana ka mifona eo anatrehan’Andriamanitra.
Tandremo ny vavaka amin’ny fahazarana fotsiny! tandremo koa manaraka an’Andriamanitra tsy amin’ny fahamasinana ! fa ny devoly no lasa tonga eo akaikinao sy mamaly ny vavakao! Izany no mahatonga an’i Jesosy nanao hoe Matio 7:21 « Tsy izay rehetra manao amiko hœ: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko Izay any an-danitra. »
Tsia !! noho izany mila mitandrina tsara isika eo anatrehan’Andriamanitra. Olona mandeha amin'ny fahamasinana no tadiavin'Andriamanitra.
Tsarovy fa raha mpankato ianao dia havahan'ny Tompo foana koa na samy misy olana izao aza dia tsy ampitovian'Andriamanitra ny manompo Azy sy ny tsy manompo azy, ary hoy ny Tompo aza ao amin'nyMatio 6:8 « Koa aza manahaka azy ianareo; fa fantatry ny Rainareo izay tokony ho anareo, raha tsy mbola mangataka aminy aza ianareo. »
Efesiana 3:20 « Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika »
FA MIJERY NY FONTSIKA ALOHA NY TOMPO ALOHAN’IZANY REHETRA IZANY.
Fehiny : Raha nisy zavatra tsy nety teo amin’ny fiainanao hatramin’izay dia ataovy vita fihavanana amin’Andriamanitra aloha ianao satria Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, mba tsy handeha amin’ny fahazarana fotsiny ny fandehanantsika mivavaka !
Mandehana amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra, mankahalà ny ratsy sy ny zavatra mifanohitra amin’ny Tenin’Andriamanitra fa mankatoava an’Andriamanitra. Aza atao ho zava-dehibe ny fihetsika hivelany fotsiny, ny fanaovanao ireo asa sy ny fandoavanao ny vola ho fanatitra, na ny fitoriana ny filazantsara rehetra sns...fa ny fonao matahotra an’Andriamanitra no ilain’ny Tompo aminao.
Andriamanitra dia nampanantena fa hihaino fa manantona Azy aloha isika. Tsy misy miafina aminy ny zavatra rehetra fa ianao no hanafinafina an'io ataonao io, fantatr'Andriamanitra ny antsipirihan'io tsy faha tahoranao an'Andriamanitra io. Tsy manontany akory ny sitrapony vao manao zavatra ka lasa manaonao foana.
Teneno izay tsy nety tamin'ny fiainanao, lazao izay zavatra tena nataonao. Fa ianao sy ny Tompo no miresaka eo. Andriamanitra anie dia hampahita eo amin'ny fiainantsika manomboka izao.
Mandinika ny fotsika Izy ary te hanadio tanteraka antsika koa. Ento amin’i Jesosy ny fonao androany ary angataho ny Fanahin’Andriamanitra hitarika anao eo amin’ny fiainanao manontolo.